बाँसको तामा खानुका यस्ता छन् फाइदा
एजेन्सी / प्राय सबैलाई मनपर्ने बाँसको तामा जाडोको समयमा त झनै रुचाइन्छ । यसको तातो सुप होस् वा अचार दुवैमा धेरै मानिस लोभिने गर्दछन् ।यसको ताजा टुसाबाहेक बोत्तलमा अचारको रूपमा राखेर धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । खासम�
जाडोमा स्वास्थ्य रहन खानुहोस यी खानेकुरा
एजेन्सी / जाडो महिनामा शरिरमा छिट्टै चिसो पस्ने सम्भावना भएकाले खानपानमा निकै ध्यान पु&yen;याउनुपर्ने हुन्छ । खानपानले गर्दा समेत रोगहरुले छिट्टै भेट्ने हुनसक्दछ । जाडोका समयमा तातो र स्वस्थ खानेकुरा खानुपर्दछ । यहाँ केही खाने�
बोक्राहरु फाल्ने गर्नुभएको छ ? के–केका बोक्राको कस्तो फाइदा हेर्नुहोस्
एजेन्सी / सामान्यतया हामी बोक्राहरुलाई त्यसै फाल्ने गर्दछौँ । विभिन्न फलका बोक्राहरुले अनुहार सुन्दर बनाउने देखी लिएर विभिन्न रोगहरु समेत निको पार्ने गर्दछन् । जसको बारेमा जानकारी नभएका कारण बोक्राहरु नाश भएर जान्छन् । यहाँ
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा दुई महीनादेखि अस्पतालमै बन्धक भए रामदारस
परासी / अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च तिर्न नसक्दा पश्चिम नवलपरासीका एक बिरामी गत दुई महीनादेखि अस्पतालमै बन्धक हुन पुगेका छन् । नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका&ndash;४ हडाहाका रामदारस बेलदार बुटवलस्थित जेनस अस्पतालमा बन्धक छन् । गत क�
गलकोट / नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम बागलुङमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जिल्लामा विसं २०७३ असारदेखि शुरुआत गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म ३८ हजार २७३ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भ�
काठमाडौँ / महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले कपिलवस्तुका ४४ वर्षीय एक बिरामीको कलेजोको वरिपरि पलाएको ट्युमर (हेमान्जिओमा) को शल्यक्रिया गरी निकालेको छ । अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ शल्यचिकित्सक प्राडा �
काठमाडौँ / डा गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ । सोलिडारिटी फर डा केसी एलाइन्सले डा केसीसँग गरिएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आज प्रदर्शन गरेको हो । सो संस्था�
भारतीय नोट पछि अब नेपालमा भारतीय औषधि पनि प्रतिबन्धित
इटहरी&nbsp;/ नेपालले भारतीय नोट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै अब भारतीय औषधिमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । भारतीय औषधिहरु गुणस्तरहिन भएको गुनासो बढेपछि भारतबाट नेपाल भित्रिने ८६ प्रकारका औषधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको हो ।
काठमाडौं / विभिन्न समयमा विभिन्न माग राखेर अनसन गर्दै आएका डा गोविन्द केसीले आफ्नो माग पुरा नभए फेरी अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले सम्झौता अनुरुप नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुने आश्वासन दिएपछि पुस २५ गतेसम्म
इटहरी / भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो । ऋण लागोस् तर रोग नलागोस । स्वास्थ्य रहने सबैको इच्छा रहेको हुन्छ तर बिरामी हुनु प्रकृतिक नियम नै हो । हरेक मान्छे बिरामी हुन्छ रोग लाग्छ रोग बिना नै जिवन चलाउँछु भन्दा त्यसो गर्न सकिदैन तर हामी �
जाडोमा छाला सुन्दर राख्ने ७ उपाय
एजेन्सी&nbsp;/ जाडो लागेसँगै मानिसहरुमा हात खुट्टा फुट्ने देखी सम्पूर्ण शरिर नै सुख्खा हुने गर्दछ । बाहिरी हावा चिसो भएका कारणले र आफुले प्रयोग गर्ने गरेको साबनहरु निकै कडा भएका कारणले छाला लाइ रुखो बनाउने गर्दछ । जाडोमा छालालाई �
दमौली / तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने असहाय एवं आर्थिकरुपमा विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय घर परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराइने गाउँपालिकाका अध
काठमाडौँ / हिमालयको काखमा विकास भएको योग आधुनिकताले लोप हुँदै गएकामा सरकारले राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरी मनाउन थालेपछि पुनर्जागरण शुरु भएको छ । वैदिककालमा ऋषिमुनिले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिपादन गरेको योग नेपालबाट विश्वभर फै�
बैतडी / पछिल्लो समय बैतडीमा आँखाका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सदरमुकामस्थित गोठलापानी र पाटनमा रहेको आँखा उपचार केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय जिल्लामा आँखाका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको हो । आर्थिक वर्र्�
चुइगम चपाउनुहुन्छ ? यस्ता छन् चुइगमका बेफाइदाहरु
एजेन्सी / प्राय किशोर किशोरीहरुले धेरै मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेको चुइगमका निकै बेफाइदाहरु रहेका छन् । कतिले स्वाद मन परेर यसको प्रयोग गर्ने गर्छन् त कतिले पड्काउन मन लागेर । तर इजरायलको तेलअबिब विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्
चिया पिउनुका यति धेरै बेफाइदा
एजेन्सी / नेपालीहरुको बिहानीको सुरुवात नै चिया पिएर हुने गरेको छ । सबैका आ&ndash;आफ्नै रोजाइअनुसार चिया हुन्छन् । कतिलाई कालो चिया मन पर्छ त कतिलाई दुध हालेको । तर चिया पिउनु शरिरका लागी फाइदाजनक भने छैन । एक सर्वेक्षणका अनुसार बिह�